ငါးကြင်းကိုစားခြင်းထက်? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သူ Rogolistik ကြိုက်တယ်
အဆိုပါငါးကြင်းပိုမြန်ထိုကဲ့သို့သော vodomah crucian rastt အတွက်, အဃ။ ထိုကဲ့သို့သော mollusks, crustaceans, အင်းဆက်ပိုးမွှားများလောင်း, worm နှင့်တူသောအဖြစ်နက်နဲလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမား vodomah ငါးကြင်း feed ကိုအများစု benthic သက်ရှိအတွက်တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်လုံလောက်ကြီးမားသောအရွယ်အစားရောက်ရှိ။ ရေတိမ်ပိုင်းရှုတ်ထွေး ozrah ငါးကြင်းအစားအစာထဲမှာရေမျောနှငျ့ငါးအရွယ်အစားဘယ်လောက်လျော့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါးကြင်း၏မကြာခဏ tugoroslymi တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ငါးကြင်းကသူ့နားမှာအမြဲနေသော, ပင်လယ်ရေညှိ, မြက်ပင်များနှင့်ရွှံ့ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အရွက်သည်သူ၏အစာကိုသောအသေးစားအင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်လောင်းတွန်းလှန်ထားတဲ့ဆိုးဆေး, tanning ဂုဏ်သတ္တိများ, ဆံ့ကြောင့် crucian ငါးကြင်း, သို့သော်, ငါး၏အခြားအမျိုးအစားများအဖြစ်, rogolistnik ကိုမုန်းသည်ကိုထိုအခါသတိရသင့်သည်။ ပွင့် rogolistnik သည့်အခါယင်း၏ဝတ်မှုန်သူတို့ရဲ့အမှိုက်သရိုက်များ၏ပါးဟက်သို့လာပြီဖြစ်သောကြောင့်, ငါးကြင်းယေဘုယျအားဖြင့်, သူ့ချုံဖုတ်ထဲကနေထွက်ခွာ။ fleshy နှုတ်ခမ်းနှင့်ရှိသမျှသောငါးလိုပဲ, crucian ငါးကြင်း၏အရသာကိုနှင့်အနံ့ကအလွန်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနေကြတယ်။ သူ Gourmet နှင့်မွှေးရနံ့အနံ့မြစ်၌ရှိသကဲ့သို့, တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်ချက်အတွက်အားလုံးလမ်းညွန်ထဲမှာပြန့်နှံ့ကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်ရာ, ပင်ရေရပ်နေသည်ကိုအတွက်တစ်ဦးမျှမျှတတရှည်လျားသောအကွာအဝေးနှင့်အတူဆွဲဆောင်။ အနံ့ငါးစာသည် သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်သူကမွှေးဆီအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအနံ့ကြောင့်မရှိမဖြစ်ရေနံ (anise, ပူစီနံ, လာဗင်ဒါ) သို့မဟုတ် lavrovishnevyh ပေါက်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာထည့်သွင်းခဲ့သည်မှအရာ, linseed, hempseed ။ အဆုံးစွန်သောငါးကြင်းအဘို့အခြောကိုကြီးစွာသောဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။
အဆိုပါငါးကြင်းရေနံဆီ၏ကြီးမြတ်သောအနံ့ဆွဲဆောင်သည့်အခါရောဂါဖြစ်ပွားမှုလည်းရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုငါးစာတွေထဲကစဉ်းစားသောငါးကြင်းမုန့် pshnnuyu, buckwheat, မုယောစပါးဂျုံယာဂုနှင့်ဒိန်ခဲကဲ့သို့။ ကျနော်တို့စာရင်းနှင့်ငါးဝါးမှချစ်ကြောင်းသုံးပုံတစ်ပုံနှင့်, သူ့ fastidiousness မှပြန်လာကြပါဘူး, ကျွန်တော်လေ့လာရေးနှင့်သုတေသနတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့လယ်ကိုရယူပါ။
အိမ်မှာက, ငါးကြင်းငါးမွေးကန်ငါးများအတွက်သာမန် feed ကိုကျွေးမွေး၏။ ရိုင်း vodomah ငါးကြင်းထိုသို့သော mollusks, crustaceans, အင်းဆက်ပိုးမွှားများလောင်း, worm နှင့်တူသောအဖြစ် benthic သက်ရှိအစာကျွေး။ ဃ
Posted in, ကြိုဆို
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,260 စက္ကန့်ကျော် Generate ။